Lapho ukutshala ama-dahlias emhlabathini ovulekile
I-Dahlias iyathanda ukushisa kakhulu, ngakho-ke ngisho nokushintsha kancane kokushisa kungaba yingozi kubo. Uma ukhula izinhlobo ezihlukahlukene zonyaka zezimbali, kubalulekile ukumba nokugcina izilimo eziyizigaxa ebusika kuze kube sekuqaleni kwentwasahlobo. Ngaphezu kwezilimo eziyizigaxa, imbewu ingasetshenziselwa ukutshala. Uma utshala i-dahlias emhlabathini ovulekile nokuthi ungayenza kanjani, kuyasiza ukwazi abalimi bokuqala.
Batshale endaweni ekhanyayo elangeni. Kuhle uma uhlangothi oluseningizimu. Abathandi bezitshalo kumele bazi isikhathi esiqondile sokutshala ama-dahlias emhlabathini ovulekile. Lokhu kuzokhula kahle kakhulu futhi kufinyeleleke amaqabunga anamandla ale mbali emangalisayo.
Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukutshala i-dahlia. Ukunakekela kumele kwenziwe ngendlela efanele, ngokulandela izincomo ezibekwe kulesi sihloko.
Izimbali zalolu hlobo zifuna kakhulu emhlabathini. Kumele kube nenhlabathi enezakhi ezanele ezibalulekile, futhi isakhiwo somhlabathi siyinto evulekile. Lokhu kuyadingeka ukuze amanzi nomoya kudlule ngaphakathi ngaphakathi futhi kunondle isitshalo.
Zama ukwenza konke ngaphambi kokuqala kokufika. I-Dahl emhlabathini kufanele ifakwe emhlabathini, ilungiselelwe kusukela ekwindla. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuwugcoba phansi kumamitha angu-30 ubude bese wenza umanyolo (umanyolo noma izinyoni zezinyoni).
Ngentwasahlobo, isikhathi esihle kakhulu siza lapho ungatshala khona ama-dahlias emhlabathini ovulekile. Ngalokhu, emgodini ngamunye, qiniseka ukuthi ufake indawo eyodwa yomquba, okumele ixutshwe nama-humus. Uma ekwindla usengakwazi ukutshala umhlaba, bese ufaka emgodini owodwa kilogram yomquba ohlanganiswe nomhlabathi.
Uma kunqunywe ukutshala ama-dahlias embewu, izinhlobo zezitshalo ezincane noma ezithintekayo zifanelekile lokhu.
I-varietal dahlias ikhiqizwa yi-cuttings noma i-division. Lapho imbewu isetshenziselwa ukutshala, kudingeka itshalwe enhlabathini yabalimi ngoMashi. Izinhlobonhlobo zalolu hlobo lwezimbali zikhula ngokushesha, futhi kufanele zitshalwe kusenesikhathi, ngesikhathi esifanayo, lapho zihlwanyela izinhlobo ezihlukahlukene zamazambane.
Lapho ukutshala kwama-dahlias emhlabathini sekuphelile, ukukhula kwabo okuqhubekayo kuzoxhomeke ekutheni bahlume kanjani kahle nokuthi ngabe amahlumela amancane anikezwa yini. Ukuze uthole imbali enhle, udinga ukunakekelwa njalo ngalesi sitshalo. Ukwenza lokhu, ugeze futhi uchithe inhlabathi ngesikhathi. Ukulungiselela kokuqala kokutshala izilimo eziyizigaxa ze-dahlia ukuhlanza kusuka ezimpandeni ezomile. Ungakhohlwa ukumboza ukusikeka ngamalahle. Emva kokwenza lokhu, shiya lezi zilimo eziyizigaxa ebhokisini eligcwele peat. Leli bhokisi kufanele lihlale egumbini elinokushisa okungenani ama-degrees angu-18 nokukhanya okuhle. Uma nje amasonto amabili edlula, izilimo eziyizigaxa ziyoba neziqu. Ngemuva kwalokho, badinga ukuba baqhekeke ukuze izinso nezinsipho zihlale. Ngale ndlela uzokwazi ukufika ezingxenyeni ezinhlanu ukusuka ku-tuber eyodwa. Lokhu kuhlukaniswa kuyadingeka ukukhiqizwa kwalolu hlobo lwezimbali.
Manje sizokwazi ukuyiveza lapho sitshala ama-dahlias emhlabathini ovulekile nge-cuttings. Ngokushesha nje lapho bekhula kancane, ungakwazi ukususa amahlumela ase-lateral, asevele akhule ngokuphakama kwamamentimitha angu-10. Lezi zihlahla (cuttings) kufanele zitshalwe emhlabathini. Ngemuva kokuthi bajwayele, kufanele banikezwe indawo yokuhlala ehlala njalo. Ngaphambi kwebusika, izimbali ziyoba nesikhathi sokubilisa imbali, futhi kuzoba nezilimo eziyizigaxa ezintsha ezizohlwanyelwa umlimi wensimu.
Lapho umlimi engadini efuna ukwazi ukuthi uzohlwanyela yini ama-dahlias emhlabathini obala, kufanele futhi akhumbule ukuthi ngokukhula nokuvikeleka okungcono kwezifo, kubalulekile ukuguqula izimbali nsuku zonke endaweni entsha. Ngeke babuyiselwe endaweni yabo yangempela kuze kube ngemva kweminyaka emithathu.
Utamatisi Boni-MM: ukubuyekezwa, incazelo ehlukahlukene nokulima
Izimbali ezincane ezihlotshisiwe - izitshalo zokuhlobisa endlini yakho yezwe
I-Hydrangea petiolate - i-curly liana
Sadik efasiteleni lakho: kanjani ukunakekela ekhaya ngelamula
Indima ulimi emphakathini ngamunye
"MegaFon", i-GPRS: kulungiselelwa. Kuyini GPRS efonini yakho
Udweba kanjani ipensela Am Nyama izigaba?
Cordiant Snow Cross: ukubuyekezwa, Ukucaciswa, ukubuyekeza nezithombe
Ebusuku umbono emehlweni ngoba Shotgun IL-27, "Daedalus 180", "Pulsar" (isithombe)
Kungakhathaliseki ukufaka PVC iwindi e indlu yamapulangwe?
Ngiphuphe izindandatho zegolide. Dream Kuhumusha uchaza
Isakhiwo sesithathu esenziwe ngephepha - sidala ubuhle ngezandla zethu